Talmoda - Wikipedia
Ny Talmoda dia fanangonan-dalàna izay ahitana ny fivoasana ny Torah. Ny Talmoda dia fitambaran'ny fehezan-dalàna atao hoe Misnà (hebreo: מִשְׁנָה / Mishnah) sy ny fivoasana ny Misnà atao hoe Gemarà (hebreo: גמרא / Gemarah). Ny zavatra ao amin'ny Talmoda izay mikasika ny fanapahan-kevitry ny raby momba ireo zavatra mahakasika ny lalàna nefa misy tsy fitovizan-kevitra no mamorona ny atao hoe Halakà (hebreo: הֲלָכָה / Halakha), ary ny angano sy fitantarana madinika ampiasaina ho enti-manome ohatra momba ny lalàna dia atao hoe Agadà (hebreo: אגדה / Agadah).
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe תַּלְמוּד / Talmud, izay midika hoe "fandalinana" ny Talmoda.
Misy karazany roa ny Talmoda, dia ny Talmodan'i Palestina sy ny Talmodan'i Babilôna. Ikambanan'ireo endrika roan'ny Talmoda ireo ny Misnà, nefa samy manana ny Gemaràny izy roa ireo. Ny Talmodan'i Palestina, izay atao hoe koa Talmodan'i Jerosalema, dia nosoratan'ny manampahaizana jiosy tao Palestina teo anelanelan'ny tanonjato faha-3 taor. J.K. sy ny fiantombohan'ny taonjato faha-5. NyTalmodan'i Babilôna dia vita soratra tamin'ny taonjato faha-5. Izy no lasa soratra manam-pahefana noho ireo sekolin'ny raby tany Babilôna tsy ravan'ny zava-niseho rehetra mandritra ny taonjato maro, raha miohatra amin'ny an'i Palestina.
Ny Talmoda, amin'ny hevitra mifintin'io teny io, dia ireo asa soratry ny manampahaizan'ny jodaisma, sy ny fivoasana ataony dia fandraisana anjara lehibe indrindra amin'ny literatioran'ny raby teo amin'ny tantaran'ny jodaisma. Isan'ny malaza indrindra ilay atao hoe Mishna Torah nosoratan'ilay raby sy filozofa ary dokotera jiosy espaniola atao hoe Mimônida. Famintinana ny literatiora rabinika momba ny lalàna tamin'ny androny izany. Ny fivoasana fantatra indrindra dia ny an'ny Talmodan'i Babilôna izay fantatra noho ny asan'ny raby atao hoe Shlomo ben Itzhak na Rashi sy ireo manampahaizana jiosy atao hoe tosapista izay niaina tao Frantsa sy tao Alemaina teo anelanelan'ny taonjato faha-12 sy faha-15, ka isan'izy ireo ny zafikelin'i Rashi.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Talmoda&oldid=980089"
Dernière modification le 25 Janoary 2020, à 03:56
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2020 amin'ny 03:56 ity pejy ity.